कोरोनाको जोखिम ह्वातै बढेपछी फेरी बढ्यो काठमाडौमा निषेधाज्ञा : थपिए यस्ता नियम , दैनिक उपभोग्य बस्तुका लागि के गर्ने ? हेर्नुहोस – Classic Khabar
कोरोनाको जोखिम ह्वातै बढेपछी फेरी बढ्यो काठमाडौमा निषेधाज्ञा : थपिए यस्ता नियम , दैनिक उपभोग्य बस्तुका लागि के गर्ने ? हेर्नुहोस
May 11, 2021 367
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । दोस्रो पटक वैशाख २९ गते बढाइएको निषेधाज्ञा तेस्रो पटक जेठ १३ गते सम्मका लागि लागू गरिउको गरिएको छ ।
मंगलबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनबीचको बैठकले थप दुई साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । थप गरिएको निषेधाज्ञा थप कडा हुने पनि जनाइएको छ । ललितपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार अत्यावश्यकबाहेक सबै सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको छ । ललितपुरका सिडिओलाई कोरोना पुष्टि भएकाले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारुी वस्नेत वैठकमा सहभागी भएका थिए ।
थप गरिएको निषेधाज्ञामा त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परेमा आयोजनाबाहेकका सबै निर्माण कार्यमा पनि रोक लगाइएको छ । त्यस्तै होटेल रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह, व्रतबन्धलगायतका भोजभतेरमा पनि रोक लगाइएको छ । घरमा भने १० जनासम्म भेला हुने गरी यस्ता कार्य गर्न दिइने निमित्त प्रजिअ बस्नेतले जनाए ।
दैनिक उपभोग्य बस्तुको किनमेलको समय बिहान ९ बजेसम्म तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर १० बजे बनाइएको छ । त्यस्तै कालीमाटीलगायतका तरकारी तथा फलपलू बिक्री बेन्द्रबाट खुद्रा बिक्रीमा रोक लगाइएको छ । ती बजारबाट थोक बिक्री मात्रै गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ ।
Prev‘संविधानको धारा जति पल्टाऊ फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री’
Nextकोरोना संक्रमणबाट आज एकै दिन २२५ जनाको मृत्यु, सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च, कुन जील्लामा कतिको मृत्यु ? यति धेरैको मृत्यु संगै सरकारले पनि गर्यो यस्तो घोषणा
बुर्का लगाएर यसरी लगिँदै थियो ….यसरी जोगिइन् उनि ? २२ वर्षीय युवतीको बयान सुन्दा प्रहरी नै छक्क पर्यो